Factory tour - Zhejiang Tonva amapulasitiki umshini CO., LTD
Sihlala sibeka ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko endaweni yokuqala. Sinegumbi lokucwaninga nentuthuko elizimele, futhi lihlanganiswe nethimba le-R & D eliqeqeshiwe, kufaka phakathi onjiniyela abaphambili be-blow molding, onjiniyela bokuklama isikhunta, ochwepheshe bokubumba, njll.
Isikhunta & Icubungula Workshop
I-TONVA ifakwe isethi yohlelo lokucubungula oluphambili nemishini emihle. Sikholelwa ngokujulile ukuthi ikhwalithi nesivinini kuyizinto ezisemqoka zokuwina umncintiswano, imishini esezingeni eliphezulu, hhayi nje kuphela engathuthukisa ikhwalithi ngokuqhubekayo, kepha futhi inciphisa umjikelezo wokukhiqiza futhi yenze imikhiqizo yekhasimende incintisane kakhulu emakethe.
Mayelana nokulungisa iphutha
100% ukuhlolwa kwekhwalithi ngaphambi kokuthunyelwa.
Sizokwenza iphutha lisuse umshini ngokuya ngezidingo zomthengi ngomkhiqizo osezingeni lokulungisa iphutha .Emva kokuba umthengi eqinisekise amasampula, uzongena esigabeni sokulethwa. Onjiniyela bethu bangaya phesheya kwezilwandle ukuze kulungiswe ukulungisa iphutha, umthengi angathumela futhi onjiniyela efektri yethu ukuze bafunde ukusebenza.